Saalihaa Saamii: 'Konsartiin walloo osoo guyyaan darbuu baatee kana caalaatti milkaa'a ture' - BBC News Afaan Oromoo
Saalihaa Saamii: 'Konsartiin walloo osoo guyyaan darbuu baatee kana caalaatti milkaa'a ture'
Konsartiin Walloo kaleessa galma barkumeetti qophaa'e silaa Adoolessa 20 ALI tti qabamee kan darbedha. Konsarticha kan qopheessite Artist Saalihaa Saamii sababni konsartichi darbeef BBCtti himtee jirti.
"Jalqabarratti manni itti qopheessinu kuni qabeenyummaansaa kan Oromoo waan hin taaneef dhimma keenya yeroo ta'u mootummaa naannoo Oromiyaarraa waraqaan siibarraa'ee heeyyamsiisteeti kan argattu. Akka warra kaanii salphumaan hin heyyaman.''
Kanarraa ka'uun adeemsa hundaa fi waraqaalee barbaachisu hunda xumurree konsartichi boru yeroo jedhamutti akka darbu murtaa'e jetti.
"Konsartichi Sambata xiqqaa ta'ee osoo jiruu, warri galma kana bulchu waraqaan isin barbaachisu tokko hir'ateera kanaaf siniif hin heyyamnu nuun jedhan.
Konsartiin Walloo har'a gaggeeffamuuf ture maaliif dabarfame?
Du'a Artiist Iteenash Girmaa
Konsartii Walloo suuraan
''Silaa kana erga beekanii dursanii nubeeksisuu ni danda'u ture. Kana itti yaadanii kan godhanidha. Yaannisanii silaa nudhoowwachuudha. Ammoo yoo deebinee waraqicha ilaallu wanti hir'ate tokkolleen hin jiru," Jetti saaliyaan.
Dhumarrattis gama mootummaatiin ajajni waan darbeef eeyyamamuu eerti.
Kanaaf konsartichi warruma galmicha bulchutu saganticha waan hin feeneef akka hafu yookan darbu gochuu himte.
Torbeetti darbuudhaan alattis sagantaan kuni Sambata xiqqaa yoo ta'e nama hedduuf mijataa akka ta'u waan beekaniif Dilbata ta'u malee jechuun sagantichi dilbata akka adeemsifamu fedhiisaaniin murteessanii jetti.
Ta'us konsartiin Wallootti gammachuu guddaa akka argatte himti Saaliyaan.
"Ana kan na gammachiise irra caalaa hamilee ummata keenyaati. Oromoo fi saboonni biroos walitti dhufuun miiliyoona hedduu caala anaaf. Ani akkanattin ilaale yoo Oromoon asirraa waa hubachuu danda'e".
Maallaqi saganticharraa walitti qabame hanga ammaa adda bahee akka hin xumuramne himte.
Galiin argame kuni ummata Walloo miidhaan irra gahe bira akka gahuuf koreen hundaa'ee hojii adda baasuu hojjechaa jiraas jette.
''Koree Finfinnee fi Wallootti hundaa'e waliin taanee ummata walloo qabsoo waggaa shanan darbee keessatti miidhaman walitti qabnee hanga maallaqni nuuf gaheen nigargaara namoota keenya" jechuun himti.
Finfinnee keessatti konsartii qopheessuun ulfina qabaatus hammuma namoonni akka hin taane barbaadan akka ta'u kan barbaadanis waan jiraniif keessa bahuun inuma dandahama jetti saaliyaan.
"Waan gaarii qabattee yoo dhufte gargaarsa ni argatta. Ulfinnisaa diina Oromoo hin barbaanne hedduutu jira. Keessattuu waan gargaarsa oromooti jedhurratti hudhaa baayyata. Ta'us mootummaanis waan nama gargaaruf inuma taha."
Konsartiin Walloo har'a Finfinneetti gaggeeffamuuf ture maaliif dabarfame?
Weelliftuu Iteenesh Girmaa: "Sadarka kanarraan kan na gahe jabeenya ishiiti" - Dammaraa Laggasaa